Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : /bins/ohabolana/ananana
Proverb 377 Anamalahon' Ambanidia : takalo kely no ananana azy. [Veyrières 1913 #5249, Cousins 1871 #156]
Proverb 2119 Fisoitrafo nitonoan-kena : menaka kely no anjarany fa ny ventiny tsy ananany anjara . [Rinara 1974 #79]
Proverb 3363 Malahelo tsy ananan' olom-bola , ka tsy azo amidy maina . [Rinara 1974]
Proverb 3364 Malahelo tsy ananan' olon-trosa : mba isan' ny mpanana ihany. [Rinara 1974 #1925]
Proverb 3916 Mason- -tsokina : izay any ny tena kely ahiratra . [Cousins 1871 #1652]
Mason- -tsokina : izay an' ny tena kely ahiratra . [Veyrières 1913 #2208]
Mason- -tsokina , ka izay an' ny tena kely ahiratra . [Houlder 1895 #1367]
Mason- -tsokina ka ny an' ny tena kely no ahiratra . [Rinara 1974 #2160]
Mason- -tsokina ka ny kely ananana no ahiratra . [Rajemisa 1985 #35]
Mason- -tsokina , masom- -boalavo , izay kely ananana ahiratra . [Veyrières 1913 #844]
Mason- -tsora , mason- -tsokina : ny kely ananana ahiratra . [Samson 1965 #M89]
Proverb 4158 Mihambo ny soa tsy ananana ka vao midify dia fosain' ny olona . [Rinara 1974 #2309]
Proverb 4290 Mirehaka amy ny be tsy ananana, toy ny vadi-kelin’ Antananarivo . [Cousins 1871 #1812]
Mirehaka amin' ny be tsy ananana toy ny vadikelin' Antananarivo . [Houlder 1895 #1810, Veyrières 1913 #1427]
Proverb 4679 Na ambony aza ny tetika izay takatry ny ananana ihany no vita . [Rinara 1974 #2644]
Proverb 5105 Ny fitia no tsy ananana ka ny mody no mankalaina . [Rinara 1974 #2999]
Proverb 5154 Ny harena sahala amin' ny angely ka samy miritika amin' ny ananany . [Rinara 1974 #3034]
Ny harena tahaka ny angely ; samy miritika ny ananany . [Cousins 1871 #2251]
Ny harena tahaky ny angely : samy miritika ny ananany . [Veyrières 1913]
Proverb 5279 Ny mahantra tsy ananan' olon-trosa : miantsena miadana ihany. [Rinara 1974 #3089]
Proverb 5391 Ny mpivady tsy ananan' olom-bola : miheby tsy arahin-tebaka . [Rinara 1974 #3165]
Proverb 5933 Patsa no ananana ka ny amalom-boasira no ananganan' efitra . [Rinara 1974 #3487]
Proverb 5965 Rafotsibe manara-moron-drano ka tsy mahazo , dia miroboka ka maty nandimby ananana . [Veyrières 1913 #1900]
Proverb 6861 Tanin' andro hariva ka kely sisa hananana azy. [Rinara 1974 #4048]
Toy ny tanin' andro hariva , ka tsy ho ela intsony dia ho lasa . [Rinara 1974 #4334]
Proverb 7207 Tokantranon' angely , ka midrikina amin' izay ananana . [Rinara 1974 #270]
Proverb 7836 Tsy ny omby be ananana no olona . [Rinara 1974]
Tsy ny omby betsaka ananana no olona . [Rinara 1974]
Proverb 8035 Vantotr' akoho no ananana , ka ny hanati-bodiondry no saintsainina . [Rinara 1974 #4855]
Proverb 8158 Venty no ananana , ka ny kirobo telon' ny olona no tsy ahaiza-miaina . [Rinara 1974 #4932]
Proverb 8417 Zava-tsy ananana mahabakabaka , hoy ilay namahana saobakaka . [Rinara 1974]
Zava-tsy ananana mahabakabaka , hoy ilay namahan-tsabakaka . [Cousins 1871 #3772]